အကုသိုလ် ဆယ်မျိုး နှင့် ကုသိုလ်ဆယ်မျိုး
အကုသိုလ်ကမ္မပထ ဆယ်မျိုး နှင့် ကုသိုလ်ကမ္မပထ ဆယ်မျိုး
၃. မှားယွင်းသော အယူရှိ၏၊ ”လှူရကျိုး မရှိ၊ ပူဇော်ရကျိုး မရှိ၊ ဧည့်ဝတ်ပြုရကျိုး မရှိ၊ ကောင်းစွာ ပြုအပ် မကောင်းသဖြင့် ပြုအပ်သော ကံတို့၏ အကျိုးဝိပါက် မရှိ၊ ဤလောကဟူသည် မရှိ၊ တစ်ပါးသော လောကဟူသည် မရှိ၊ အမိ၌ ကောင်းမကောင်းပြုမှု အကျိုးဟူသည် မရှိ၊ အဖ၌ ကောင်း မကောင်းပြုမှု အကျိုးဟူသည် မရှိ၊ ဥပပါတ်သတ္တဝါတို့ဟူသည် မရှိကြ၊ ဤလောကကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ပါးသောလောကကိုလည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိ၍ မျက်မှောက်ပြုကာ ဟောကြား နိုင်ကုန်သော၊ ဖြောင့်မှန်သော အရိယမဂ်သို့ ရောက်ကြကုန် ကောင်းစွာ ကျင့်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့ဟူသည် လောက၌ မရှိကုန်”ဟု ဖောက်ပြန်သော အမြင်ရှိ၏။ စုန္ဒ ဤသို့လျှင် စိတ်ဖြင့် မစင်ကြယ်မှုသည် သုံးမျိုးဖြစ်၏။ (အန ၁၀.၁၇၆)
၃. မှန်ကန်သော အယူရှိ၏၊ ”လှူရကျိုး ရှိ၏၊ ပူဇော်ရကျိုး ရှိ၏၊ ဧည့်ဝတ်ပြုရကျိုး ရှိ၏၊ ကောင်းစွာပြုအပ် မကောင်းသဖြင့် ပြုအပ်သော ကံတရား၏ အကျိုးဝိပါက်သည် ရှိ၏၊ ဤလောကသည် ရှိ၏၊ တစ်ပါးသော လောကသည် ရှိ၏၊ အမိ၌ ကောင်းမကောင်းပြုမှု အကျိုးဟူသည် ရှိ၏၊ အဖ၌ ကောင်းမကောင်း ပြုမှု အကျိုးဟူသည် ရှိ၏၊ ဥပပါတ်သတ္တဝါတို့သည် ရှိကြကုန်၏၊ ဤလောကကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ပါးသော လောကကိုလည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိ၍ မျက်မှောက်ပြုကာ ဟောကြားနိုင်ကုန်သော၊ ဖြောင့်မှန်သော အရိယမဂ်သို့ ရောက်ကြကုန် ကောင်းစွာ ကျင့်ကြကုန်သော သမဏဗြာဟ္မဏတို့ဟူသည် လောက၌ ရှိကုန်၏”ဟု မဖောက်ပြန်သော အမြင်ရှိသူ ဖြစ်၏။ စုန္ဒ ဤသို့လျှင် စိတ်ဖြင့် စင်ကြယ်မှုသည် သုံးမျိုးဖြစ်၏။ (အန ၁၀.၁၇၆)